Monday January 18, 2016 - 01:36:43 in Wararka by Xarunta Dhexe
Shirkan oo socday mudo afar maalmood ah ayay madaxdu siweyn uga doodeen qodobo dhowr ah oo ay isku hayeen, walow qaar kamid ah qodobadaasi ay adkaatay in ay xal ka gaaraan amaba ay tanaasulaad isu sameeyaan.
Raysul wasaaraha dowladda Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo warbaahinta la hadlay xilli isaga iyo madaxweeynaha ay ka duuli rabeen garoonka Kismaayo ayaa waxaa uu sheegay in shirku soo xirmay qodobo qaar la isku afgartay, kuwa kale ee dhimanna ay dib ambaqaadi doonaan.
Raysul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo sheegi doonto xilliga la isu soo laaban doono, balse waxa uu xusay in ay jiraan qodobo la isku mari waayay.
Madaxweeynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Max'uud, Raysul wasaaraha, Madaxweeyneyaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo xubnihii ku wehlinayay safarkooda ayaa mar qura ka duulay garoonka Kismaayo.
Madaxweeynaha Puntland Dr. C/weli Max'ed Cali Gaas ayaa isagu weli ku sugan magaalada Kismaayo.
Arintan ayaa muujineeysa in shirkii uu kusoo idlaaday fashil, madaxda Soomaaliyeedna ay xal ka gaari waayeen hannaanka loo marayo doorashooyinka dalka ka dhici doona dabayaaqada sanadka.
Lama garanayo tallaabada xigi doonto, balse arintan ayaa niyadjab ku ah umadda Soomaaliya oo iyagu indhaha ku heeysay shirka ka socday Kismaayo ee looga tashanayay aayaha dalka. - See more at: http://hiiraan.com/news/2016/Jan/wararka_maanta17-94538.htm#sthash.SVmTE33V.dpuf